Ejila uwe "mmiri na-ere mmiri" dị ka akwa mmiri ozuzo.
Ihe dị iche na akwa mmiri na akwa mmiri na-ekpochapu mmiri Na mkpokọta, a na-eji akwa mmiri akwa akwa mmiri. Mmiri na-etolite ụmụ irighiri mmiri n'elu akwa ahụ (Dị ka akwukwo lotus). Ma, mana ọ bụ n'ezie waterproof, ma na-ebelata absorption nke mmiri ...
Kedu agba ị na-ahọrọ maka akwa mmiri ozuzo na ụbọchị mmiri ozuzo? You maara agba dị nchebe maka akwa mmiri ozuzo?
Kedu agba bụ ihe kachasị ewu ewu maka akwa mmiri ozuzo? N'ụbọchị mmiri ozuzo, n'ihi ọhụụ na-adịghị mma, ọ ka mma iyi uwe mmiri ozuzo nwere agba dị iche iche iji chetara ndị na-agagharị agafe na ndị na-agafe agafe ka ha lebara gị anya karị. Dika acha uhie uhie, odo odo, oroma, akwukwo nri wdg.
Kedu ihe dị mma maka akwa mmiri ozuzo na otu esi ahọpụta akwa mmiri ozuzo?
Dị ka anyị niile maara, ihu igwe na-agbanwe agbanwe n'oge udu mmiri. Ọ bụ nsogbu ịpụ n’ụbọchị mmiri na-ezo. Ọbụna ma ọ bụrụ na e nwere nche anwụ, traụza ahụ na akpụkpọ ụkwụ ga-mmiri mmiri, karịsịa mgbe mmiri ozuzo na ifufe siri ike, nche anwụ ezughị iji chebe anyị. Ya mere ọ dị mkpa ịhọrọ akwa mma ...
Comụ nwanyị na-ekpuchi mmiri ozuzo, Pu Raincoat, Pumụaka Pu Raincoat, Peva Raincoat, Ịkwanyere Poncho, Pvc Raincoat,